Manao ahoana no tokony ho toetran’ny olon’Andriamanitra? – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 décembre 14, 2012 Laisser un commentaire sur Manao ahoana no tokony ho toetran’ny olon’Andriamanitra?
« Ary rehefa ren’i Jaona tao an-trano-maizina ny asa nataon’i Kristy, dia naniraka ny mpianany izy hanao aminy hoe: Hianao va Ilay ho avy, sa mbola hafa no andrasantsika? Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Mandehana hianareo, ka ambarao amin’i Jaona izao renareo sy sy hitanareo izao: Mahiratra ny jamba, ary afaka ny mandringa; diovina ny boka, ary malady ny marenina; atsangana ny maty, ary ny malahelo dia itoriana ny filazantsara. Ary sambatra izay tsy ho tafintohina noho ny amiko. Ary nony lasa ireny, dia vao nilaza an’i Jaona tamin’ny vahoaka Jesosy ka nanao hoe: Hizaha inona no nivoahanareo tany an’efitra? Volotara nohozongozinin’ny rivotra va? Sa hizaha inona no nivoahanareo? Olona mitafy soa va? Indro ny mitafy soa dia ao an-tranon’ny mpanjaka. Sa hizaha inona no nivoahanareo? Mpaminany va? Eny, hoy Izaho aminareo, sady mihoatra lavitra noho ny mpaminany izy. Izy no ilay voasoratra hoe: « Indro, Izaho maniraka ny irako hialoha Anao, Izay hamboatra ny làlanao eo alohanao » Mat.11:2-10
I Jaona dia zanak’i Zakaria sy Elizabeta izay samy efa antitra vao nahazo teny fikasana hiteraka, ary tanteraka tamin’ny fahaterahan’i Jaona izany. I Jaona izay ambaran’ny Soratra Masina ihany hoe: Injany! misy feon’ny miantso hoe: Manamboara làlana any an’efitra ho an’i Jehovah, manaova làlambe any an-tany foana ho an’Andriamanintsika. Aoka hasandratra ny lohasaha rehetra, aoka haetry ny tendrombohitra sy ny havoana rehetra.
Raha izao tantara eto izao dia olona nanana ny naha izy azy i Jaona raha ny fampianarana izay nentiny, satria dia nanana mpianatra mihitsy izy eto. Maro no nanaiky ny fampianarany. Ny tena zava-dehibe anefa eto dia ny fitoeran’i Jaona ho mahatoky. Na dia tany an-tranomaizina aza izy dia nanaraka ny asa nataon’i Kristy taty ivelany. Mety maro tokoa ny fihafiana na ny zavatra niaretan’i Jaona tao an-tranomaizina, fa tsy nahasakana azy tsy nisaina ny amin’ny Tompony izany: naniraka ny mpianany izy hanontany an’i Jesosy Kristy.
Mba ho fampaherezana an’i Jaona anefa dia tsy nisalasala Jesosy nanambara ny fahagagana maro nomba ny asa izay nataon’ny Tompo: Mahiratra ny jamba, afaka ny mandringa…Sambatra izay tsy tafintohina noho ny amiko.
Raha ny fitenin’i Jaona eto dia tsy izy mihitsy no ho tafintohina noho ny amin’i Jesosy, liana dia liana izy ny amin’ny Mpamonjy: Hianao va ilay ho avy, sa mbola hafa no andrasantsika? Raha olona nitady voninahitra ho an’ny tenany Jaona dia ho nialona ny zava-dehibe vitan’i Jesosy, fa tena mipetraka amin’ny toerana nanomanan’Andriamanitra azy izy: Manamboara làlana any an’efitra ho an’i Jehovah. Raha araka ny tantara dia lehilahy zatra niafy i Jaona, zatra ny fietrena, ary izany indrindra no nitondrany fanenjehana hoe manana demonia izy. Ny efitra ambara eto dia efitra tena efitra tsy misy na inona na inona, nefa mety ho efitra ilazana koa ny toe-pa-nahin’ny olona nitoriany teny. Izany toetrany zatra mietry izany no mahatonaga azy tsy ho tafintohina noho ny amin’i Jesosy. Sambatra, sambatra ny olona izay tsy tafintohina noho ny amiko hoy ny Tompo Jesosy!
Inona ary no tokony ho tsohahintsika amin’izao tantara eto izao?
MAMPIERITRERITRA NY AMIN’NY MAHA OLON’ANDRIAMANITRA ANTSIKA NA TSIA IZAO.
Moa ve isika mba olona mahatoky tahaka an’i Jaona? Tsy mba nivadika tamin’ny Tompony hatramin’ny farany. Na dia tany an-trano-maizina aza ny tenany dia nisahirana namantatra ny amin’ny Tompony. Moa ve isika raha sendra ny zava-tsarotra dia mbola tsy mivadika amin’ny andraikitra nomen’ny Tompo antsika, ka tsy hihemotra, na ho kivy ka hamoy fo?
Moa ve isika tsy mba azon’ny fakampanahy rehefa mahita vokatra tsara amin’ny andraikitra nankinina amintsika ka hitady voninahitra ho an’ny tenantsika? Fa i Jaona dia nanetry tena ka nanambara hoe: Izy tsy maintsy mitombo fa izaho kosa tsy maintsy mihena. Mahafaly ny mpanompo tsara sy mahatoky ny fahitana ny Tompo mitafy voninahitra. Koa raha mahiratra ny jamba, na afaka ny mandringa, dia ny Tompo no omem-boninahitra.
Mijanona ho mpanamboatra ny làlan’i Jehovah: i Jaona dia nanaiky ny ho fitaovana eo ampelatanan’ny Tompo ihany. Asa raha efa nanomana ny tenantsika isika ho vonona ho iraka amin’ny raharaha ilan’ny Tompo Jesosy antsika amin’ny fotoana mahamety azy?
Fa raha izany tokoa isika dia tsy ho tafintohina amin’ny Tompontsika ka ho tanteraka amintsika ny hoe Sambatra!
Fa raha tsy nahavita izany isika dia hadinina amintsika izany.
Tsy ho tanteraka amintsika ny tenin’ny Soratra Masina hoe: hisikina ny tompony dia hampipetraka azy hihinana, dia ho avy ka hanompo azy!
Andao isika hanetry tena eo anatrehan’ny Tompo Jesosy, ka hiverina Aminy, hiaiky ny tsy fahatanterahantsika eo anatrehany. Dia hanavao ny fanoloran-tenantsika Aminy indray.
Aoka isika hangataka ny Fanahy Masina hampatsiahy antsika ny tsy mety rehetra ary hiverina amin’Andriamanitra !
Publié parfilazantsaramada décembre 14, 2012 Publié dansUncategorized